ဆောင်းခိုငှက်….. နှင့် …. ခြေရာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ဆောင်းခိုငှက်….. နှင့် …. ခြေရာများ
ဆောင်းခိုငှက်….. နှင့် …. ခြေရာများ
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Dec 10, 2012 in Think Different |5comments
ဆောင်းခိုငှက်နှင့် အခြား ဆက်စပ်မှုများ ....
ဆောင်း …… ခို ………. ငှက်
ဆောင်းသည် နေ့တာတို၍ ညတာရှည်၏။ ဆောင်းရက် မနက်များသည် ကျနော့်အဖို့ အထီးကျန်ဆန်စေသည်။ ထို့အတူ ဆောင်းရက် ညများသည်လဲ ပြောင်းလဲမှု တစုံတရာအဖြစ် အထွေအထူး မပေါ်လာခဲ့ပေ။ လူတိုင်းတွင် နေ့စဉ် ဘ၀များ ရှိနေသည်။ မွမ်းကျပ်မှု၊ တွေဝေမှု၊ ဖိစီးမှု အစသဖြင့် ” မှု ” ပေါင်းများစွာအလယ် ကျင်လည်ဖြတ်သန်းရင်း ထိုနေ့စဉ် ဆိုသော အရာများကို ကျော်ဖြတ်နေရသည်။ ထိုကာလများတွင် ကျနော့်အဖို့ ဆောင်းရက်များသည် ပို၍ပင်ပန်း ခက်ခဲနေစေပါသည်။
ဆောင်းခိုငှက် တကောင်၏ နံနက်ခင်းသည် တက်ကြွလန်းဆမ်းမှု ပြည့်နှက်နေသော်ငြား ရုန်းကန်မှုများအား အချိန်တိုတွင်း ဖြတ်သန်းရသဖြင့် ပို၍ပင်ပန်းစေပါသည်။ ကျနော်သည် ဆောင်းခိုငှက် တစ်ကောင်ကဲ့သို့ မိုင်ထောင်ချီ ပျံသန်းခဲ့ရယုံသာမက နံနက်ခင်း၏ အားအင် အနည်းငယ်ဖြင့် ဘ၀ကို အချိန်တိုအတွင်း ပင်ပန်းစွာ ဖြတ်သန်းနေရသူပင် ဖြစ်သည်။
ဆောင်းခိုငှက်တို့ မည်သည် အချိန်တန်သော် မိုင်ထောင်ချီသော နေရင်းအရပ်သို့ ပြန်ကြရပေလိမ့်အုံးမည်။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်၏ အတည်ရေးသောစာ ပြီး၏ …။
လွတ်လပ်ခြင်းတရားကို လက်ကိုင်မြတ်နိူး၍ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနေကြသော အနှီငှက်ဟူသော သတ္တ၀ါတို့သည် ဆောင်းဟူသော အချိန်အခွင့်ကာလအရာအား အကြောင်းပြု၍ မိုင်ထောင်ချီဟူသည့် ဝေးကွာခြင်း အရပ်တို့ပေါ်၌ အခြေအနေ အကြောင်းအရင်းများကြောင့် သွားရောက်နေထိုင်ခြင်းအပေါ် ယင်းတို့၏ ပျံသန်းနိူင်ခြင်း လုံ့လအပေါ် များစွာ ထင်ကြီးမှတ်စွဲကုန်၍ နေရင်းအရပ်ပေါ် မတည်မှီလိုခြင်းထက် ပို၍ များစွာသော မကောင်းပြောခြင်းဖြင့် ပြုစိမ့်သောငှာ ကောင်းကျိုးမပြု အစုစု မတည်သော အကျိုးကြောင်း အချက်အလက်တို့ဖြင့် မိုက်မဲစွာ ဝေဖန်ခြင်း အမှုကို အစဉ်တစိုက် ပြုမူကြကုန်၏ …။
မင်းကြီးမဟာအံရာဇာ၏ ” ဟေမာန်န ငှက်တို့၏ အပျက်စဉ် အမြင်လွဲအလင်္ကာ”မှ ကောက်နှတ်ဖော်ပြသည်။
ငှက်တော့ ငှက်ပဲ ဒါပေမဲ့ … ပြန်မလာတဲ့ အပြီးဆောင်းခိုငှက်
ကျနုပ်လည်း ဆောင်းခိုငှက် တကောင်ပေတည်း …. ကျနုပ်သည် မပျံနိူင်တော့သော်ငြား အသံကောင်းပေး၍ တွန်တတ်၏။ တိုက်ပေးက အသေခံ ခွတ်၏။ အခြေအနေမလှကား ပြန်ပြေး၏။ အကောင်ငယ်ကား လည်ဆံထောင်၍ ဖိန့်ဖိန့်လုပ်၏။ ကျနုပ်ကား ရှေ့တည့်တည့်ကို မမြင်ရ စောင်းငဲ့ကြည့်ရန်ကား လွန်စွာသေးသိမ်သည်ထင်၏။ ကျနုပ်၏ နည်းစနစ်ကား မိမိဘက်ရက်၍ ဆတ်ခနဲကောက်စား၏။ ကျနုပ်၏ အမှတ်သညာသည်ကား လည်ဇလုပ်နှင့် မဆံ့များပြား၏။ ကျနှပ်ကား အရည်အချင်းရှိ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တို့ အပေါ် ဗိုလ်မထား အကန့်အသတ်မဲ့ မကောင်းသောဇွဲဖြင့် အောင်နိူင်မှုကို ရလို၏ ……………………….
အတွေးအခေါ်ဆိုတာ တစ်ဘ၀စာ တတ်မြောက်၊ သင်ကြား၊ သိမြင် ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို လေးနက်စွာ ဆင်ခြင်နေရင်း တဒင်္ဂ အချိန်အတွင်းမှာ အလင်းရောင်ခြည်တခုအသွင်နဲ့ သင်ရလိုက်တဲ့ အရာပါ။ ထိုအတွေးအခေါ်တွေကို သင်ပြန်လည် ဝေမျှဖြန့်ဝေချိန်မှာတော့ ၀ိဝါဒကင်းပြီး အဇတ္တတွေ မပါဝင်အောင် သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နေနေရလ်ိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားလူတွေ ရလိုက်တာက သင့်ရဲ့ အစစ်အမှန် အရာမဟုတ်ဘဲ လိုက်လျော ညီထွေစွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ အစစ်အမှန် မဟုတ်သော အစစ်အမှန်တွေဘဲ ..။
ကားလ်မတ် ဂျာမန် ဒဿနပညာရှင် ( ၁၈၁၈ – ၁၈၈၃ )
ကြမ်းပိုးများ သင့်သွေးကို စုပ်သည်မှန်သော်လည်း သူတို့သည် စကားတလုံးမျှ မဆိုဘဲ သင့်ကို ကိုက်ကြသည်။ ယင်းသို့ ပြုခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်၍ ပွင့်လင်းသည်။ ခြင်တို့၏ လူ့အသားကို ဖောက်ထွင်းနည်းသည် အတော်ပင် ကျနသေချာပါ၏။ သို့သော် မကိုက်ခင် မိန့်ခွန်းရှည်ကြီးသည် အကိုက်ခံရသူတို့ အဖို့ စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်သည်။ သူတို့က ..သူတို့သည် လူ့သွေးကို သောက်သုံးခြင်းမှာ မှန်ကန်သော အမှုဖြစ်သည်ဟူ၍ အကြောင်းဖော်ပြချက် အားလုံး ဖော်ထုတ်ရှင်းပြနေသည် ဆိုပါမူ ထိုသို့ပြုမူခြင်းသည်လျှင် ပို၍စိတ်တိုဖွယ်ဖြစ်သည်။
လူဆွန်း ( တရုတ်စာရေးဆရာကြီး)
စိတ်၏တည်ငြိမ်ခြင်းသည် ဉာဏ်ပညာ၏ လှပသော ကျောက်မျက်ရတနာတို့တွင် တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကိုယ်နှုတ်နှလုံးတို့ကို ကာလရှည်ကြာစွာ သည်းခံ၍ ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုမှရသော ရလဒ်ဖြစ်၏ ယင်းရှိနေခြင်းသည် အတွေးအခေါ် ပေါ်ထွန်းလာမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုတို့၏ နိယာမတရားကို သာမန်အားဖြင့်သိသော အသိထက် ပိုသောအဖြစ်၊ ရင့်ကျက်သော အတွေ့အကြုံတို့ကို ညွှန်းဖော်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
စာပေ၌ တည်ကြည်မှန်ကန်စွာ ရေးသားဖော်ထုတ်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် စွမ်းရည်ရှိမှု၌ တည်ရှိသည်။ မှန်ကန်သဘာဝကျခြင်းသည် ကြီးမားသော စာပေစွမ်းရည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွှန်ုပ်တို့ ကြားနာသိရှိရသော စာများသည် ရိုးစင်းကြသည်တို့က ရိုးစင်း၍ ဟိတ်ဟန်လေသံပြင်းသည်တို့ကလည်း ပြင်းထန်ကျသည့် အလျောက် မထိရောက်ကြချေ။
သိတတ်ခြင်းက သူများစွာ တတ်ကျွမ်းလေပြီဟူ၍ ဂုဏ်ယူမောက်ကြွား၏။ ပညာကမူ သူထိုထက်ပို၍ မသိသည့်အတွက် နှိမ့်ချနေပေသည်။
“တောင်းပန်ပါတယ်၊ အပြောင်းအလဲ မရှိဘဲ ဇွတ်စွဲ မနေပါနဲ့ … ” ဒီလိုထင်သောသူ …….
သူ့မှာသာ မှန်သော ကြောင်းကျိုးတင်ပြနိူင်စွမ်း ရှိသည်ဟု အခိုင်အခံ့ ဆိုသူ ……..
သူသာလျှင် ပြောတတ် ဆိုတတ်သော စွမ်းရည် ရှိသည်ဟု ထင်နေသူ …………….
ထိုသူမျိုးကို သင်တကယ်တမ်း သိပါမူ ….
သူ့၌ အနှစ်ကင်း၍ ဗလာကျင်းနေကြောင်း သိမြင်လာပေမည်။
Dog has Many Friends ,
The reason dog has so many friends is that he wags his tail instead of his tongue …….
လောလောဆယ်ဆယ် မင်္ဂလာပါ ကိုရင်ရဲစည်ရေ
အမငီး ကရဲစည် ညည်း ဆောင်းခိုငှက်ကြီးကလည်း ချက်စားချင်စရာအေ
အဲ့ကြက်ကြီး ……….. ဆာဗာလေးလို့
ညွတ် ညွှန့် ညွပ် (ခရပ်ဒစ်တူ ထောင်ထောင်)